Bit By Bit - Ịmepụta mmekọrịta ọnụ - 5.3.3 ọgbọ na-Patent
Onye ọhụhụ bụ oku na-emeghe na-enyere patent examiners ịchọta ụzọ ọhụụ; ọ na-egosi na enwere ike iji oku emepe maka nsogbu ndị na-enweghị ike ịhazi.
Ndị nlele patent nwere ọrụ siri ike. Ha nabatara nkọwa ndị ọkàiwu nke ọhụrụ ọhụrụ, mgbe ahụ, ha ga-ekpebi ma ọ bụrụ na ihe a sị na ọ bụ "akwụkwọ." Ya bụ, onye na-enyocha ga-ekpebi ma ọ bụrụ na e nwere "ihe mbụ" -apụta akọwapụtara nke mbụ a - nke ga-eme ka Echere patent ezighi ezi. Iji ghọta otú usoro a si arụ ọrụ, ka anyị tụlee onye nchọpụta jụrụ aha ya bụ Albert, na-asọpụrụ Albert Einstein bụ onye malitere mmalite na Office nke Patent nke Switzerland. Albert nwere ike ịnweta ngwa dị ka US Patent 20070118658 nke Hewlett Packard gbara maka "Ntuziaka Onye Ntuziaka" nke a na-ahọrọ ma kọwaa ya ọtụtụ akwụkwọ dị na Beth Noveck Wiki Government (2009) . Nke a bụ nkọwa mbụ sitere na ngwa ahụ:
"A na kọmputa usoro, gụnyere: a processor; a isi ndenye / mmepụta usoro (BIOS) gụnyere mgbagha ntụziaka nke, mgbe gburu site na processor, hazi na processor na-:-ebute ike on onwe ule (post) nhazi na isi ndenye / mmepụta usoro a Mgbakọ ngwaọrụ; ugbu onye ma ọ bụ karịa management njikere formats na a onye ọrụ interface; -enweta a nhọrọ mgbaàmà si onye ọrụ interface-akọwapụta otu n'ime ndị management njikere formats adade ke onye ọrụ interface; na hazi a ngwaọrụ tinyere na Mgbakọ usoro na kwuru na ọ bụ management njikere format. "
Albert ọ ga-enye ikike iri abụọ na afọ maka ikike a ma ọ bụ na e nweela nkà mbụ? Oghere ndị dị n'ọtụtụ mkpebi ikpebi dị elu, mana ọ dị mwute, Albert ga-eme mkpebi a n'ejighị ọtụtụ ihe ọmụma ọ ga-achọ. N'ihi nnukwu akwụkwọ nkwado nke patent, Albert na-arụ ọrụ n'oge nrụgide siri ike nke oge na ọ ghaghị ime mkpebi ya na nanị awa iri abụọ. Ọzọkwa, n'ihi mkpa ọ dị ịnọgide na-ezobe ihe ahụ a chọrọ iji mepụta ihe, Albert ekweghị ka ya na ndị ọkachamara n'èzí gaa (Noveck 2006) .
Ọnọdụ a mere ka onye prọfesọ iwu bụ Bet Noveck mebie kpamkpam. Na July 2005, nke sitere n'aka Wikipedia, o dere otu post blog nke isiokwu ya bụ "Peer-to-Patent: A Proposal Modest" nke a na-akpọ maka usoro nyocha nke ndị ọhụụ maka patent. Mgbe emekọrịtara na Ụlọ ọrụ US Patent na Trademark Office na ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka nkà na ụzụ ndị dị ka IBM, ndị ọgbọ na-amalite na June 2007. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ narị afọ abụọ nke ọchịchị na otu ndị ọkàiwu yiri ka ebe a na-adịghị achọ ịga ohuru, mana Pent-to-Patent na-arụ ọrụ mara mma iji dozie mmasị mmadụ niile.
Ihe odide nke 5.9: Nweputa ubochi uzo. Edeghachiri na Bestor and Hamp (2010) .
Lee otú o si arụ ọrụ (ọgụgụ 5.9). Mgbe onye na-emepụta ihe kwetara ka ngwa ya na-aga site nyochaa obodo (gbakwunyere ihe mere ọ ga-eji mee nke ahụ n'otu oge), a na-edega ngwa ahụ na weebụsaịtị. Ihe ọzọ bụ na ndị na-enyocha obodo na-atụle ngwa ahụ (ọzọ, ọzọ na ihe mere ha ga-eji na-ekere òkè na oge), na ihe atụ nke omume ọhụụ nwere ike ịchọta, kọwaa, ma zigara na weebụsaịtị. Usoro nke nkwurịta okwu, nchọpụta, na nbudata na-aga n'ihu, ruo n'ikpeazụ, obodo nke ndị na-enyocha ihe na-ahọrọ iji họrọ 10 kachasị dịka a na-enyo enyo na-ezigara na nyocha nke patent maka nyochaa. Onye na-enyocha ihe nchọpụta ahụ na-eduzi nyocha nke onwe ya na nchikota ya na ntinye site na Peer-to-Patent na-enye ikpe.
Ka anyị laghachi na US Patent 20070118658 maka "Onye ọrụ-nhọrọ nchịkọta nhọrọ nhazi." Nke a bugoro patent na Peer-to-Patent na June 2007 bụ ebe Steve Pearson gụrụ ya, bụ ọkachamara software engine maka IBM. Pearson maara ebe a maka nchọpụta ma chọpụta otu ihe eji eme ihe: akwụkwọ ntuziaka si n'aka Intel nke isiokwu ya bụ "Management Management Technology: Ntuziaka Ntugharị Ntuzi" nke e bipụtara n'afọ abụọ gara aga. Ejiri akwukwo a, yana ihe ndi ozo na nkwurita uka site n'aka ndi obodo ndi ozo, onye nyocha nke patent bidoro nyochaa nke ikpe ahu, ma mechapu ihe ngwa ngwa, nke ozo n'ihi ihe omuma nke Intel bụ nke Pearson (Noveck 2009) . N'ime okwu ikpe 66 nke mechara mee ka ọ bụrụ na ọ bụ ihe nkedo, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasent 30 ka a jụrụ kpamkpam nke dabeere na nchọpụta mbụ e nwetara site na Peer-to-Patent (Bestor and Hamp 2010) .
Ihe na-eme ka ebumnuche nke Onye ọhụụ mara mma bụ ụzọ ọ na-esi enweta ọtụtụ ndị na-emegiderịta onwe ha niile na-egwu egwu. Ndị na-eme nchọpụta nwere mkpali ịbuana n'ihi na ụlọ ọrụ patent ahụ na-elele ngwa ngwa ndị ọkpụkpọ ngwa ngwa karịa patent na-aga site na omenala, nyocha usoro nzuzo. Ndị na-enyocha ihe nwere mkpali itinye aka na iji gbochie ihe ọjọọ, ọtụtụ ndị na-achọ ka usoro ahụ dị ụtọ. N'ikpeazụ, ụlọ ọrụ patent na patent examiners nwere mkpali na-esonye n'ihi na nke a nwere ike ime ka ha nwekwuo nsonaazụ. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na usoro nyochaa obodo ahụ na-achọta 10 ụzọ a na-enweghị ike iji nweta nkà, ndị a na-enweghị ike ịchọta ya nwere ike ịghara ileghara anya site na onye nchọpụta nchọpụta. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, Onye ọhụụ na onye na-enyocha ihe nchọpụta na-arụkọ ọrụ ọnụ kwesịrị ịdị mma ma ọ bụ ka mma karịa onye na-enyocha ihe nchọpụta na-arụ ọrụ na iche. Ya mere, oku a na-akpọghe anaghị edochi ndị ọkachamara mgbe niile; mgbe ụfọdụ ha na enyere ndị ọkachamara aka ịrụ ọrụ ha ka mma.
Ọ bụ ezie na ndị na-eto eto nwere ike iyi dị iche karịa Netflix Prize na Foldit, o nwere usoro yiri nke a na ọ dị mfe ịlele karịa nhazi. Ozugbo mmadụ bipụtara akwụkwọ ntuziaka "Ọrụ Management Technology: Ntuziaka Ntugharị Ntuziaka" ọ dịtụ mfe-maka nchọpụta nyocha, ma ọ dịkarịa ala-iji nyochaa na akwụkwọ a bụ ihe mbụ. Otú ọ dị, ịchọta na akwụkwọ ntuziaka ahụ siri ike. Onye nlere anya na-egosikwa na ọrụ mmeghe na-ekwe omume ọbụna n'ihi nsogbu ndị doro anya na ha nwere ike ịhazi.